Asc aqristaheena sharafta lahoow maalin wanaagsan/Jimco Wanaagsan. maadaama ay soo idlaadeen horyaaladda sannad-cayaareedka 2020-2021, kooxaha waxay isku diyaarinayaan xilli-cayaareedka soo aadan waxaana ay indhaha u jeedinayaan dhanka suuqa kala-iibsiga iyadoo koox walbana lala xiriirinayo bartilmaameedyadooda macquulka ah.
Haddaba halkan hoose ayaan idiin kugu soo koobeynaa wararkii ugu dambeeyay ee maanta warbaahinta ay qortay suuqa kala-iibsiga.
TV3 ayaa qortay in Barcelona ay u soo bandhigtay Lionel Messi qandaraas cusub. Heshiiska haatan ee Messi ayaa dhacaya 30-ka June waxaana kabtanka kooxda Barca iyo xulka Argentina lala xiriirinayaa kooxaha Manchester City iyo Paris Saint-Germain.
Saul Niguez ayaa qirtay inuu doonayo inuu ka tago kooxda heysata horyaalka LaLiga ee Atletico, Juventus ayaana hoggaamineysa loolanka loogu jiro ciyaaryahanka reer Spain, sida ay qortay Marca. United – oo waqti dheer eeganeysa- Bayern Munich iyo PSG ayaa sidoo kale xiiseynaya.
Tababaraha PSG Mauricio Pochettino ayaa ah beddelka ugu cadcad ee Zinedine Zidane ee Real Madrid, ayuu yiri bogga hore ee Mundo Deportivo. Zidane ayaa ku dhawaaqay bixitaankiisa. Tababarihii hore ee Inter Antonio Conte, tababaraha Castilla iyo halyeeyga kooxda Raul iyo sidoo kale Xabi Alonso – oo haatan gacanta ku haya kooxda keydka ee Real Sociedad – ayaa sidoo kale ku jira liiska. Pochettino ayaa sidoo kale lala xiriirinayaa inuu si lama filaan ah ugu laabanayo kooxda Tottenham.
Barca ayaa wadahadalo la yeelatay goolhaye Gianluigi Donnarumma, sida uu sheegayo Fabrizio Romano. Qandaraaska Donnarumma ee Milan ayaa dhacaya, waxaana durba la xaqiijiyay bixitaankiisa. kaddib markii ay lahadleen wakiilka Mino Raiola, Barca ayaa qarka u saaran inay go’aansato inay lasoo saxiixato Donnarumma, oo sidoo kale lala xiriirinayo Juve iyo United.
Kooxda heysata Premier League ee City ayaa isha ku heysa inay jabiso rikoorkooda suuqa kala iibsiga si ay u keensato kabtanka Aston Villa ee lagu qiimeeyo 100 milyan ginni Jack Grealish, sida ay qortay Daily Mail. City ayaa sidoo kale xiiseyneysa xiddiga Tottenham Harry Kane – oo diirada u saaran kooxaha ay xafiiltamaan ee United, Chelsea, Madrid iyo Barca.
Telegraph ayaa sheegtay in tababaraha United Ole Gunnar Solskjaer uu qarka u saaran yahay inuu heshiis cusub oo seddex sano ah u saxiixo Manchester. Solskjaer ayaa ku hogaamiyay United inay ku dhameysato kaalinta labaad ee Premier League, inkastoo kooxda ay ka yaabisay Villarreal fiinalkii Europa League xilli ciyaareedkan.
Barca ayaa ku dhow inay dhammeystirto heshiis lacag la’aan ah oo ay kula soo wareegeyso ciyaaryahanka khadka dhexe ee Liverpool Georginio Wijnaldum iyo xiddiga Lyon Memphis Depay, sida laga soo xigtay Mundo Deportivo. kooxda macalin Ronald Koeman ayaa sidoo kale indhaha ku haya labada wakiil ee xorta ah ee City Sergio Aguero iyo Eric Garcia.
FootMercato ayaa warinaya in PSG ay u dhawaatay saxiixa daafaca dambeedka middig ee kooxda Milan Theo Hernandez.
Chelsea iyo Tottenham labaduba waxay aad u xiiseynayaan weeraryahanka Borussia Monchengladbach Jonas Hofmann, sida ay qortay Sport1.
RASMI: Liverpool Oo La Wareegtay Ibrahima Konate